Download Prisoners 2013 720p WEB-DL [1.1GB] + EngSrt[115KB] - အမျိုးကောင်းသား
Home » Movie » Download Prisoners 2013 720p WEB-DL [1.1GB] + EngSrt[115KB]
Download Prisoners 2013 720p WEB-DL [1.1GB] + EngSrt[115KB]
September 20 ရက်နေ့ထွက် Prisoners 2013 Movie ပါ.. WebRip အကြည်ဖြစ်ပါတယ်.. WebRipက.. ကျန်တဲ့ BRrip,DVDrip,HDrip တွေထက် Quality သာပါတယ်.. အခု Presoners ကားကတော့ Keller Dover တစ်ယောက် သူရဲ မိသားစုကို ကာကွယ်ရမှာပါ.. သူ့ရဲ့ ၆ နှစ်အရွယ် သမီးလေး Anna ကလည်း Joy တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ အတူပျောက်ဆုံးနေပါတယ်.. ကလေးရဲ့ အသက် နဲ့ မိသားစု ကို ရှာဖွေ ကယ်တင်ဖို့ Alex တစ်ယောက် ကြိုးစားရမဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်... Dramma ကားဖြစ်သလို သည်းထိပ်ရင်ဖို လည်းဟုတ်၊ Crime ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်. Rating 8.6 တောင်ရထားတဲ့ Movie ပါ.. Quality အတွက် ပူစရာမလိုသလို. Movie နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ Eng Subtitle ရော ရှာဖွေ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒါင်းရလွယ်ကူအောင် FileMoney ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ.. Download လုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်..
Durations: 153 Min
IMDB Ratings: Ratings: 8.6/10
Date ...............: November 12 2013
Runtime ............: 2:33:09
Bitrate ............: 3940 kbps (H264 High@L3.1)
Screens.............: $20,817,053 (USA) (22 September 2013) (3,260 Screens)
[Download Link သေ ၊ မသေ သိရန် အောက်က ပုံ ကို Click ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ New Tap ဖွင့်သွား ပြီး Webpage အသစ် ပေါ်လာရမည်။ အကယ်လို့ webpage မပွင့်လျှင် File Not Found ဖြစ်သွား တဲ့ အတွက် အခြား Mirror ကနေ ဒေါင်းပါ။ New Tap ပွင့်တယ်ဆိုရင် တော့ ပေါ်နေတဲ့ Webpage ကို ပိတ်ပစ်ပြီး Download Eng.srt(115KB) Now Button ကို နှိပ်ပြီး အောက်မှ ပေါ်လာသော Table မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Download Links များမှ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်]
Download Eng.srt(115KB) Now
FileMoney Download Click Picture To Know
Direct Download Download Not Available
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 10:39:00 PM